काठमाडाैंकाे दुधमा युरीयादेखी नुनसम्म, कृषिमन्त्री खनालले नै भने यस्तो पनि राज्य हुन्छ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काठमाडाैंकाे दुधमा युरीयादेखी नुनसम्म, कृषिमन्त्री खनालले नै भने यस्तो पनि राज्य हुन्छ
प्रकाशित मिति ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार १६:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । खाने दूधमा कपडा धुने सोडा र साबुनमा प्रयोग हुने रसायनसमेत मिसाइने गरेको पाइएको छ । गर्मीयाममा दूध फाट्नबाट जोगाउन दूध संकलन गर्ने सहकारीका व्यवस्थापक र ठेकेदारले यस्ता हानिकारक वस्तु मिसाउने गरेको पाइएको हो ।
उपत्यकाभित्र ३० दुग्ध प्रशोधन उद्योग छन् । यीमध्ये २५ डेरी उद्योगका ४२ ब्रान्डका दूध पाउचको नमुना खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालामा जाँचिएको थियो  । तीमध्ये ४० वटामा स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने वासिङ सोडा र साबुन बनाइने रसायन भेटिएको हो ।
नमुना जाँचका क्रममा ‘न्युट्रलाइजर’ का रूपमा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोअक्साइड (कास्टिक) र सोडियम कार्बोनेट गरी तीनवटै रसायन (क्षार) को मिसावट हुने गरेको देखिएको छ । ‘यी तीन रसायनमध्ये जे पनि प्रयोग भएका हुन सक्छन्,’ विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले भने ।
दूधमा स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने अखाद्य वस्तु मिसावट हुने गरेको गुनासो आएपछि सोमबार राजधानीका ४ डेरीमा छापा मारिएको थियो ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले दूध उत्पादनमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल नै नगरिएको र भयावह अवस्था रहेको बताए । ‘सबै मापदण्ड ठीक भएका कुनै पनि दूध देखिएनन्,’ उनले भने,‘म नयाँ मापदण्ड बनाउँदै छु । के–के गर्नुपर्ने हो, निर्देशन दिइसकेको छु । अब त्यसै छाडिँदैन ।’
उनले उद्योग मन्त्रालयसँग मिलेर नयाँ मापदण्ड बनाइरहेको र अब अनुमतिपत्र रद्द गरेरै कारबाही गरिने बताए । दूधमा देखिएको मिसावट देख्दा देश नै नभएको जस्तो महसुस भएको उनले बताए । ‘यस्तो पनि राज्य हुन्छ, देशै होइनजस्तो भएको छ मलाई,’ मन्त्री खनालले भने ।
राजधानीको एक ठूलो डेरी उद्योगको प्रयोगशाला प्राविधिकका अनुसार दूध संकलन हुने चिस्यान केन्द्र, सहकारीका संकलक, ठेकदार र प्रशोधन उद्योगहरूले दूधको अम्लीयपन घटाउन अल्कलाइन रसायनका रूपमा यी तत्त्व प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले मिसावट भएको कमसल उपभोग्य वस्तुबाट मानव स्वास्थ्यलाई नै खतरा पुग्ने देखिएमा १४ वर्षसम्म कैद र ५ लाख जरिवाना तोकेको छ ।
साउनभित्रै चार सचिवको अवकाश
काठमाडौं । सरकारले विशिष्ट श्रेणीका सचिव कृष्णराज बीसीलाई एक महिनादेखि जिम्मेवारी नदिई जगेडामा राखेको छ । उनलाई सरकारले गएको…
वामदेव ल्याउन गरिने उपनिर्वाचनमा राज्यकोषको करोडौं खर्च हुने
काठमाडौं । नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई संसद्मा ल्याउन उपनिर्वाचन गरिए राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । निर्वाचन आयोगका…
निर्मला पन्त प्रकरणका अर्का आरोपी पनि थुनामुक्त, प्रदीपले भने, चरम यातना र धम्की दिए
काठमाडौँ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या आरोपी प्रदीप रावलले थुनामा रहँदा आफूलाई यातना दिएको बताएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय…
स्वास्थ्य चौकीमा कुकुरको बास
वीरगन्ज । स्वास्थ्यजस्तो संवेशनशील स्थानमा कुकुरले रेखदेख गर्छ भन्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर पर्साको धोबिनी गाउँपालिका-१ मा रहेको…
चार न्यायधीशमाथि गम्भीर छानबिन
काठमाडौं । प्रभावमा परेर फैसला गरेको आरोपमा चार न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्ले गम्भीर छानबिन सुरु गरेको छ । क्षेत्राधिकारबाहिर गएर…
टेलिकमको एमडीबाट बर्खास्तमा परेकी कामिनीलाई एनसेलले पुरस्कृत गर्ने !
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेर समयमै टेलिकमलाई डुब्नबाट जोगाएको छ । टेन्डरमा भ्रष्टचार…
शिवरात्रिमा नागाबाबा : महिलालाई पशुपतिनाथ गइनसक्नु ! 15 views
‘नेपाली पोर्न स्टार’ अर्चना पनेरुका श्रीमान अश्लिल क्रियाकलाप गरेको आरोपमा पक्राउ !6views
नसा च्यापिने समस्या के हो ?6views